Ifayela le-MRIMG (Lokho Okuyikho Nendlela Yokuvula I-One)
Windows Izinhlobo Zefayela
Iyini ifayela le-MRIMG?
Indlela Yokuvula, Hlela, & Ukuguqula Amafayela we-MRIMG
Ifayela elinesandiso sefayela le-MRIMG ifayela le-Macrium Reflect Image efakwe yi-Macrium Reflect software yesipele ngenhloso yokugcina ikhophi ecacile ye- hard drive .
Ifayela le-MRIMG lingahle lakhiwe ukuze amafayela angabuyiselwa kumshayeli ofanayo esikhathini esizayo, ukuze ukwazi ukubuka amafayela nge disk virtual kwikhompyutha ehlukile, noma ukukopisha konke okuqukethwe kwedrayivu eyodwa kuya kwenye .
Kuye ngezinketho ezikhethiwe uma ifayela le-MRIMG lidalwa, kungaba ikhophi ephelele yediski ehlanganisa ngisho nemikhakha engasetshenzisiwe, noma ingase ibambe imikhakha equkethe ulwazi. Kungase futhi icindezeleke, ivikelwe iphasiwedi, futhi ibhalwe ngekhodi.
Indlela Yokuvula Ifayela le-MRIMG
Amafayela we-MRIMG angama-Macrium Cabanga amafayela we-Image adalwe futhi avuliwe yi-Macrium Reflect. Ungakwenza lokhu kubuyisela> Dlulisa amehlo kufayela lesithombe ukuze ubuyisele ... imenyu yokukhetha.
Kusuka lapho, khetha i- Browse Image uma nje ufuna ukufaka ifayela le-MRIMG njenge-drive yangempela ukuze ubheke kuyo futhi ukopishe amafayela / amafolda athile ofuna ukuwabuyisela. Ungaphinde ukhiphe i-MRIMG ngokuchofoza ngakwesokudla (noma ukuthepha + ukubeka izikrini zokuthinta) ifayela bese ukhetha Hlola isithombe , noma ngisho usebenzisa i- Command Prompt (bheka ukuthi lapha).
Ithiphu: Ukuchitha ifayela le-MRIMG kungenziwa nge-Macrium Cabanga ngaphansi kokubuyisela > Imenyu yokuThola isithombe .
Ukuze empeleni ubuyisele okuqukethwe kwefayela le-MRIMG endaweni yabo yangempela kunokuba nje upheqa ngokusebenzisa i-virtual drive, khetha ukubuyisela inketho yesithombe ukukhetha indawo.
Qaphela: Awukwazi ukwenza izinguquko kumafayela angaphakathi kwefayela le-MRIMG. Uma usukhuphula njenge-virtual drive, ungakopisha amafayela ngaphandle futhi wenze izinguquko okwesikhashana kubo (uma ukhetha ukwenza kube yinto ebonakalayo), kodwa ayikho enye yezinguquko eziqinisekisiwe uma unqamula ifayela.
Uma uthola ukuthi uhlelo lokusebenza ku-PC yakho luzama ukuvula ifayela le-MRIMG kodwa uhlelo lokusebenza olungalungile noma uma ngabe unomunye uhlelo olufakiwe oluvulekile amafayela we-MRIMG, bheka indlela yethu yokushintsha uhlelo oluzenzakalelayo lomhlahlandlela wokukhulisa ifayela eliqondile lokwenza lolo shintsho ku-Windows.
Indlela yokuguqula ifayela le-MRIMG
Ungaguqula i-MRIMG ku-VHD (ifayela le-Virtual PC Virtual Hard Disk) usebenzisa i-Macrium Cabanga ngeminye imisebenzi> Guqula isithombe ku-VHD menu.
Uma ufuna ifayela le-VHD ukuze libe sefomethi ye-VMDK yokusetshenziswa ku-VMware Workstation Pro, noma kufomethi yesithombe se-IMA disk, ungase ube nenhlanhla yokwenza lokho ngo-WinImage ngokusebenzisa i- Disk> Ukuguqula imenyu yesithombe se-Virtual Hard Disk ....
Amanye ama-Macrium Cabanga abasebenzisi bangase bafune ukuguqula ifayela labo le-MRIMG efayeleni le- ISO , kodwa lokho akuyona isinyathelo okufanele uyenze. Uma lokho okulandelayo kuyindlela yokubuyisela ifayela le-MRIMG elingabonakali ukubuyiselwa kahle (mhlawumbe ngenxa yokuthi i-Macrium Reflect ayikwazi ukukhiya i-hard drive), uzofuna ukudala i-CD yokuhlenga i-bootable. Bheka i-Macrium Yakha izikhombisi-ndlela zokulondoloza i-Bootable CD zokuthi ungakwenza kanjani lokho.
Noma kunjalo Ungakwazi Ukuvula Ifayela Lakho?
Esinye sezizathu ezilula zokuthi kungani ifayela ngeke livule ngohlelo okufanele lisebenze ngokucacile, kungenxa yokuthi ifayela alikho ngempela ifomethi esekelwe uhlelo. Lokhu kungase kwenzeke uma ngabe uphendule kabi isandiso sefayela.
Isibonelo, ekuboneni kokuqala, isandiso sefayela se-MRML sibheka okuningi njengokuthi i-MRIMG, kodwa amafayela e-MRML ngeke asebenze ne-Macrium Reflect. Amafayela we-MRML empeleni amafayela we- 3D Slicer Scene Explained XML adalwe futhi asetshenziswa yi-3D Slicer ukunikeza izithombe zezokwelapha ze-3D.
Into engcono kakhulu ongayenza uma uke wazama konke okungenhla ukufaka noma ukuvula ifayela lakho, ukuqinisekisa ukuthi impela ifayela le-MRIMG. Uma kungenjalo, cwaninga isandiso sefayela langempela ukuze ufunde ukuthi yiziphi izinhlelo ezingasetshenziswa ukuyivula noma ukuyiguqula.
Kodwa-ke, uma wenza ngempela ifayela le-MRIMG elingavulwa kahle, bheka Thola Usizo Olwengeziwe ngolwazi mayelana nokuxhumana nami kumanethiwekhi omphakathi noma nge-imeyili, ukuthumela kumaforamu wokusekela wezobuchwepheshe, nokuningi. Ngitshele ukuthi yiziphi izinhlobo zezinkinga onayo ngokuvula noma usebenzisa ifayela le-MRIMG futhi ngizobona ukuthi ngingenzani ukusiza.
Kuyini ifayela le-ISO?
Kuyini ifayela le-MSR?
Iyini ifayela le-XNB?
Indlela Yephasiwedi Vikela i-PDF
Kuyini ifayela le-FBC?
Iyini ifayela le-PSP?
Iyini ifayela le-XVID?
Kuyini ifayela le-AVE?
Iyini ifayela le-DXF?
Ithuluzi lamathuluzi we-Twitter Search
Indlela yokufaka & Sebenzisa amajajethi wesikhungo soziso
Kuyini i-Badoo? Umhlahlandlela Wokuqala
12 Funny kakhulu Twitter Ama-Akhawunti Akhawunti
Iyini ifayela le-PHP?
I-Digital Video Recorder Tip
Indlela Yokusebenzisa I-Dock Ku-iOS 11
Iyini ifayela le-ADP?
Ngaphambi Kokuthenga Ikhompyutha Yebhizinisi: Izici Okudingeka Uzicabange
Indlela Yokukopisha Ikheli Lewebhu Lomfanekiso (URL)
I-Amazon Fire TV: Okudingeka Ukwazi
I-TV-High Definition Television (HDTV) Isiqondiso sokuthenga
Sebenzisa i-Color Sapphire ekusakazeni kwakho ku-Trust Confidence
Lungisa i-D3dcompiler_43.dll Ayitholakali noma Ayiphutheli Amaphutha
Indlela Yokubhala Imilayezo ku-HTML noma Itheksthi Eline Plain
Ukusebenzisa i-Reverse Address Lookup ukuthola Abantu ku-intanethi
Okufanele Ukwenze Uma Abaqaphi Ngemoto Yakho Abasebenzi
Shintsha Umbala Wokubonisa eZwini
Ukuhlukunyezwa Kwemininingwane? Yini Emhlabeni?
Indlela Yokuthola Amakhodi noma ama-URL we-Web Images